Indawo Yokuhlala eBlack Rhino Game Lodge
Indawo iBlack Rhino Game Lodge bubungqina bokuba kungahlaleka ehlathini, ngaphandle kokuncama ukuhlala kamnandi. Lamagumbi ayi 14 onke anendawo enkulu, umoya opholileyo, kunye nendawo yokuphumla ezimeleyo apho ubona ihlathi ngobukhulu balo.
Indawo yokuhlala enamaxabiso aphantsi ayityesheli ubuhle nokuhlala kamnandi kuba gumbi ngalinye linako konke onokudinga okufana neziselo ezishushu, igumbi lokuvasa elihle nomabonakude. Iindwendwe zifumana indawo yokuphumla xa uhleli ubona ihlathi kuyo enawo nomoya opholileyo.
Kukho amagumbi amabini aphindwe kabini, asibhozo afanayo, kunye namane osapho. Lawosapho akwinkampi ezimele yodwa ekufuphi kwindawo enkulu enamagumbi. Lenkampi isebenzisa ipuli enye kunye nomabonakude onye.
Ukuqhuba ubuke izilwanyana